China Piri-chikamu bhodhi guruu fekitori nevatengesi | DESAY
1.Midziyo: nemumiriri mukuru uye kurapa mumiririri muyero.
2. Chitarisiko: mukaka chena mvura.
3. Inokodzera bhuku remubhuku, kusimba kwakasimba, kuita kwakanyanya, kuvaka kwakanaka.
4.Kushandisa: Inoshandiswa zvakanyanya mumatanda akasimba ehuni uye mawindo, yakasimba huni fanicha, yakasimba huni uriri, yakasimba huni mabhodhi, mapurani akabatanidzwa, huni zvigadzirwa zvinobatanidza uye zvichingodaro.
Magadzirirwo: 1L, 5KG, 10KG, 25KG, 50KG
Ruvara rwekunze: Mukuru mumiriri (Ivory) Hardener (akajeka brown)
Solid zvemukati: Mushandi mukuru （（50%） Hardener （（99%）
(1) Pretreatment: base zvinhu kuenzanisa, guruu, zvinoenderana nechikamu cheiyo huru mumiririri (mukaka chena) uye kurapa mumiririri (kusviba) 10: 1 Riza iyo glue zvakaenzana, uye yakasanganiswa glue inofanira kushandiswa kumusoro mukati me30 ~ 60 maminetsi.
(2) sizing: sizing inofanirwa kuve yakapedzwa mumineti imwe, jira guruu yunifomu uye yekupedzisira jira glue inofanira kukwana.
(3) rinoumbwa: kumanikidzwa nguva yekukwana, iyo yakapetwa ndiro mumineti 1, maminetsi matatu anofanirwa kumanikidzwa, nguva yekumanikidza 45 ~ 120 maminetsi, yakakosha huni 2 ~ maawa 4. Simba rekumanikidza rinofanira kukwana, kork 500 ~ 1000kg / m2 , huni dzakaoma 800 ~ 15000kg / m2.
(4) Post-kurapwa: mushure mekumanikidzwa kuregererwa kuti ugare uine hutano, tembiricha yehutano iri pamusoro pe20 ℃, maawa makumi maviri nemaviri anogona kugadziriswa zvishoma (saw, planer), maawa makumi maviri nemaviri mushure mekugadziriswa kwakadzika, panguva yekudzivirira mwenje wezuva uye kunaya kwemvura.
Chigadzirwa zita: maviri-echinhu plywood inonamira
Rudzi rwePVAC - PB
Kurapa nguva 2-4 maawa
chigadzirwa zita Maviri-chikamu bhodhi guruu Zita reBrand kuneta
mhando PVAC-PB Viscosity（MPA.S) 5000-8000
Magadzirirwo 1L、5KG、10KG、25KG、50KG PH 5-6
Ruvara rwekunze Mukuru mumiriri (Ivory) Hardener (akajeka brown) Kurapa nguva 2-4h
Solid zvemukati Main mumiririri（≥50%）Hardener（≥99%） Pasherufu hupenyu Mwedzi gumi nembiri
2, Excellent mvura kuramba
3, Muchitevere zvakasikwa
Iyo inokodzera jigsaw bonding yezvisiri-zvakaumbwa zvinhu uye zvakaumbwa zvinhu.
1, Pretreatment: The mwando zviri huni inofanira kudzorwa pakati 8-12%; iyo yepasi yekubatanidza pamusoro inofanira kuve yakatsetseka uye yakati sandara, isina warpage, guruva, mafuta, nezvimwe.
2, Saizi: mukuru mumiririri: kurapa mumiririri (10: 1) reshiyo kusanganisa kunoda kunyatsomutsa kwemaminitsi 3-5, kusvika yunifomu. Mushure mokunge glue yagadzirwa, inofanira kushandiswa kumusoro mukati maawa 1-2. Mabhuru uye kuwedzera kwehoriyamu zvinogona kuitika panguva yekushandisa, chinova chinhu chinowanzoitika. Unogona kuenderera mberi nekushandisa mushure mekusimudzira zvishoma.
3, Kurapa: Iyo yekutsikirira nguva kazhinji maawa 2-4, zvinoenderana tembiricha
uye hunyoro hwenzvimbo yekuvaka.
1.Base zvinhu kuenzanisa chinhu chakakosha:
Flatness yakajairwa: ± 0.1mm Mvura yemukati chiyero: 8% -12%;
2. Chiyero cheglue chakakosha kwazvo:
Iyo huru mumiririri (chena) uye inoporesa mumiririri (yakasviba brown) yakasanganiswa pachiyero che100: 10 zvinoenderana neyakaenzana muyero;
3. Kurudzirai zvakaenzana zvakaenzana:
Shandisa inomutsa kudzokorora kudzora colloid kanokwana katatu, pasina iyo yakasviba yakasviba mvura. Iyo yakasanganiswa glue mhinduro inofanira kushandiswa kumusoro mukati memakumi matatu-60 maminetsi;
4. Iyo yekumhanyisa kunyorera kumhanya inokurumidza uye yakarurama:
Iko kunyorera kweglue kunofanirwa kupedzwa mukati meminiti imwe. Iyo glue inofanira kuva yunifomu uye iyo yekunamatira kumagumo inofanira kukwana.
5.Kudzvinyirira nguva inokwana kukwana
Mabhodhi akafukidzwa akasvinirwa pamwechete mukati meminiti imwe, uye anofanirwa kumanikidzwa mukati memaminitsi matatu. Iyo yekutsimbirira nguva ndeye 45-120 maminetsi, uye iyo yakaoma huni maawa 2-4;
6, kumanikidza kunofanira kukwana:
Kumanikidza: softwood 500-1000kg / ㎡ huni hwakaoma 800-15000kg / ㎡;
7, mushure mekudzvinyirira kuchengetedza hutano:
Iyo tembiricha yehutano iri pamusoro pe20 ° C, inogona kugadziriswa zvishoma (saw, planed) mumaawa makumi maviri nemana, uye inogona kuenderera mberi ichishandurwa mumaawa makumi manomwe nemaviri. Dzivisa kupenya kwezuva uye kunaya panguva yacho;
Pashure: Polyurethane inonamira glue
Zvadaro: Terpene pinene resin glue zvinhu
mhando yepamusoro yemapuranga glue
S168 Silicone Sealant Yemamiriro ekunze-asingagone Adhesiv ...